Tababare Arsene Wenger Ayaa Si Dadban U Sheegay Inuu Dhamaaday Waqtigiisii Arsenal 15 Sano Kadibdate: 2011-03-09 04:12:39
macalinka arsenal mr arsene wenger ayaa ku jira dhamaadka mudadii dheereyd ee uu leylinayay kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada london ee arsenal sidaa waxaa ku waramay jariirad kasoo baxda dalkiisa faransiiska ee uu wareysi siiyay.
wen... Manchester United Oo 5 Sano Jir Taageera City Iyo Mario Balotelli Kusii Biirisay Kooxdeeda.date: 2011-03-09 04:12:39
kooxda haysata horyaalka ingiriiska ayaa ka yaabisay aduunka markii ay soo iibsatay cunug yar oo la yiri mustaqbal la yaab leh ayuu leeyay, da'diisanu waa kaliya 5 sano jir aan hadalkiisu xitaa buuxin iska daa inuu kubad ciyaaree.
cherle... Jack Wilshere Oo Dalab La Yaab Leh Uga Imanaya Real Madrid Oo Safka Usoo Gashay Xidigo Dhowr Ah Oo Da' Yardate: 2011-03-09 04:12:39
jack wilshere oo ah xidig da' yar qadka dhexe u xoojiya kooxda arsenal ayaa dalab lama filaan ah uga imaanayaa kooxda ugu qarash gareynta badan kooxaha aduunka waa real madrid oo ku caan baxday waxa loogu yeero galactico, oo ah magac loo bixiyay xi... Gool Hayihii Hore Ee Kooxda Manchester United Oo Kooxdiisa Kula Taliyay Inay Dhexda Adkeeyaan Si Ay Uga Adkaadaan Barcelonadate: 2011-03-09 04:12:39goolhayihii hore ee kooxda manchester united van der saar oo aad uga calool xun guuldaradii ay barcelona ku dhigay finalkii champions league ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inay sanadkan ka badin karaan, laakiin shuruud ayuu ku xiray.
xidigan reer... Mikel Arteta Oo Amaan Kala Dul Dhacay Kabtankiisa Van Persie Sheegayna Inuu Kamid Yahay Kuwa Ugu Xariifsan Kubada Cagta Aduunkadate: 2011-03-09 04:12:39xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda arsenal mikel arteta ayaa si waali ah u amaanay kabtankiisa kooxda robun van persie oo uu ku tilmaamay inuu kamid yahay 3 ama 4ta ugu xarfaansan kuwa ku xamaasha xirfada kubada cagta.
arteta oo dhowr bil... Chelsea Iyo Tottenham Oo Safka U Kala Hormaraya Sidii Ay U Heli Lahaayeen Difaaca Kooxda Bolton Gary Cahilldate: 2011-03-09 04:12:39
difaaca birta ah kooxda bolton iyo qaranka ingiriiska gary cahill ayey saf usoo galeen kooxo hor leh oo si aad ah u daneynaya xirfadiisa ciyaareed.
chelsea iyo tottenham ayaa noqonaya labadii koox ee ugu danbeysay ee iska soo xaadi... Arshavin Oo Ku Dhaartay Inuu Ka Tagayo Arsenal Hadii Uu Sii Fadhiyo Kursiga Keydka Waqtiyadan Dhowdate: 2011-03-09 04:12:39weeraryahank ruushka ah una ciyaara kooxda arsenal ayaa si lama filaan ah u sheegay inuu ka daalay fadhiga kursiga keydka, sidaa darteed uu isaga tagayo kooxda hadii ayna xaaladu isku badalin si dhaqsa ah.
arshavin oo warbaahinta la hadlaayay ayaa... Arsenal Oo Hogaamineysa Kooxaha Raba Laacibka M'vila Iyo Jack Wilshare Oo Dhaawaca Kasoo Kici Rabadate: 2011-03-09 04:12:39xidiga da'da yar ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda rennes iyo xulka faransiiska ayaa isku diyaarinaya sidii uu uga wareegi lahaa kooxaha waaweyn ee ka dhisan yurub si uu ula ciyaaro isbuuc kasta xidigo waaweyn.
waxaa arinta ka dhawaajiyay sa... Ac Milan Oo Indhaha Ku Haysa 3 Laacib Oo Uu Ka Mid Yahay Drogbaha Chelseadate: 2011-03-09 04:12:39kooxda haysata horyaalka talyaaniga ee ac milan ayaa hada u tafa xeydaneysa sidii ay ku heli lahayd weeraryahan khatar ah oo u badala booska uu baneeyay cassano oo dhaawac dheer galay.
xidigaha la tilmaamay ee qorshaha ugu jira milan waxaa ka mid ... Milan Oo Diyaar U Ah Iney Lacageyso Oo Iibiso Weeraryahankooda Pato Marka La Furo Beeca Ciyaartoyda Bisha Janaayo.date: 2011-03-09 04:12:39weeraryahanka qatarta ku ah gool dhalinta alexandare pato ayaa la sheegay in kooxdiisa milan gelisay liiska ciyaartoyda ay rabto iney iibiso bisha janaayo, marka la furo suuqa beeca ciyaartoyda.
iska iibinta pato ayaa lagu tilmaamay mid ku saabsan... « previous1267891011122021next »